ကလေးမှေးပွီး ၄၅ရကျမပွညျ့ခငျ လိငျဆကျဆံမယျဆို ဘာတှဖွေဈနိုငျမလဲ - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ကလေးမှေးပွီး ၄၅ရကျမပွညျ့ခငျ လိငျဆကျဆံမယျဆို ဘာတှဖွေဈနိုငျမလဲ?
ဆရာဝနျမြားအနနေဲ့ စုံတှဲလငျမယားတှကွေားတှငျ မီးဖှားပွီး လေးပတျကနေ ခွောကျပတျအကွာ ( ၄၅ ရကျ အကွာ ) မှ လိငျဆကျဆံခဈြတငျးနှောကွရနျ အကွံပွုထားပါတယျ ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒါဟာ သားအိမျခေါငျးနဲ့သားအိမျတို့ကို အနာကကျြဖို့ အခြိနျလုံလုံလောကျလောကျ ရစရေနျအတှကျပဲ ဖွဈပါတယျ ။
မှေးပွီးကာစ အခြိနျမှာ သားအိမျအနားသားတှဟော ပိုးဝငျရနျ အငျမတနျလှယျကူပါတယျ ။ အထူးသဖွငျ့ အခငျြးကပျခဲ့တဲ့နရောမှာပါ ။ ဒါကွောငျ့ အဲ့လိုအခြိနျ မှေးလမျးကွောငျးအတှငျး လစဉျသုံးပစ်စညျးထညျ့တာ လိငျဆကျဆံတာတှကေနေ ဘကျတီးရီးယားပိုးမှားတှေ ပေါကျရောကျနိုငျပါတယျ ။ မှေးဖှားပွီး သားအိမျကနေ ရမွှောရညျလိုတှဆေငျးတာဟာ အနညျးဆုံး နှဈပတျကနေ ရှဈပတျအထိ ကွာနိုငျပါတယျ ။
မှေးပွီး လေးပတျကနေ ခွောကျပတျအတှငျးမှာ သငျ့ဆရာဝနျမှ သငျခန်ဓာကိုယျအတှငျး အနာကကျြမှု အခွအေနကေို ပွနျလညျစဈဆေးပေးပါမညျ ။ ထိုအခြိနျတှငျ ဆရာဝနျမှ လိငျဆကျဆံရနျ အဆငျသငျ့ဖွဈမဖွဈ ဆုံးဖွတျပေးပါလိမျ့မညျ ။ ထိုအခြိနျတှငျ လိငျဆကျဆံမှုကို ရှောငျခိုငျးထားခွငျးသညျဟာလဲ တခွား ဆကျဆံနညျးမြားကိုပါ ရှောငျခိုငျးခွငျးဟု မဆိုလိုပါ ။
လိငျဆကျဆံရနျ စောငျ့ဆိုငျးနစေဉျကာလအတှငျး တခွားစိတျအာသာဖွရေေး နညျးလမျးမြားကို အသုံးပွုကာ လိငျစိတျကို လြော့ပါးစနေိုငျပါတယျ ။ တခွားနညျးမြားဆိုရာတှငျ တဈဦးနှငျ့တဈဦး အာသာဖွပေေးခွငျး ၊ လကျဖွငျ့ အာသာဖွပေေးခွငျးတို့ဆိုလိုပါတယျ ။ အဓိက သိမှတျရမညျ မှာ မိနျးမကိုယျ အတှငျး ထိုးသှငျးမှုကို ရှောငျရှားရမညျဖွဈပွီး အထူးသဖွငျ့ မှေးလမျးကွောငျးခြဲ့ထားခွငျး ပွနျခြုပျထားခွငျးအခွအနမြေားတှငျ ရှောငျရှားရနျ အထူးလိုအပျပါသညျ ။ ထို့အပွငျပါးစပျနှငျ့လိငျဆကျဆံပါကလဲ ထိုနရောမြားတှငျ ပိုးကူးနိုငျသောကွောငျ့ ရှောငျရှားရနျ လိုအပျပါသညျ ။
မှေးပွီးစ လိငျဆကျဆံရာမှာ နာကငျြနိုငျပါသလား ?
မှေးပွီးစ မိနျးမကိုယျဟာ နာကငျြယောငျရမျးနသေောကွောငျ့ သငျ့အနဖွေငျ့ လိငျဆကျဆံရာတှငျ နာကငျြနနေိုငျပါတယျ ။ ဒါကွောငျ့ ဖွညျးဖွညျးနဲ့မှနျမှနျ အခြိနျယူသငျ့ပါတယျ ။ နောကျပွီး အနအေထားသကျတောငျ့သကျသာ ရှိစရေနျလဲ ထိနျးညှိပေးခွငျးက နာကငျြမှုကို လြော့ပါးစပေါတယျ ။ မိနျးမကိုယျမှာ ခွောကျသှနေ့တေယျလို့ခံစားရပါက ခြောမှစေ့သေော ဂယျြလျမြား ခရငျမျမြား သုံးနိုငျပါတယျ ။ အခြိနျတျောတျောကွာတဲ့အထိ နာကငျြမှုကနေ မသကျသာပါက သငျ့ဆရာဝနျထံ ပွနျလညျပွသရနျလိုအပျပါတယျ ။
မှေးပွီးစ လိငျဆကျဆံရာမှာ ခံစားမှု ပွောငျးလဲနိုငျပါသလား ?
သငျ့မိနိးမကိုယျ ကွှကျသားညှဈအားမြားသညျ မှေးပွီးကာစတှငျ လြော့ကနြနေိုငျသောကွောငျ့ သငျ့အနနှေငျ့ စိတျပါမှုကိုလြော့ကစြနေိုငျပါတယျ ။ ဒါဟာ ယာယီပဲ ဖွဈတဲ့အတှကျ စိုးရိမျစရာမလိုပါ ။ သားအိမျကွှကျသား လကေ့ငျြ့ခနျးမြားလုပျပေးပါက ပွနျလညျသနျမာပွီး ညှဈအားကောငျးလာမညျပဲ ဖွဈပါတယျ ။
ကလေးမွေးပြီး ၄၅ရက်မပြည့်ခင် လိင်ဆက်ဆံမယ်ဆို ဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲ?
ဆရာဝန်များအနေနဲ့ စုံတွဲလင်မယားတွေကြားတွင် မီးဖွားပြီး လေးပတ်ကနေ ခြောက်ပတ်အကြာ ( ၄၅ ရက် အကြာ ) မှ လိင်ဆက်ဆံချစ်တင်းနှောကြရန် အကြံပြုထားပါတယ် ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒါဟာ သားအိမ်ခေါင်းနဲ့သားအိမ်တို့ကို အနာကျက်ဖို့ အချိန်လုံလုံလောက်လောက် ရစေရန်အတွက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
မွေးပြီးကာစ အချိန်မှာ သားအိမ်အနားသားတွေဟာ ပိုးဝင်ရန် အင်မတန်လွယ်ကူပါတယ် ။ အထူးသဖြင့် အချင်းကပ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာပါ ။ ဒါကြောင့် အဲ့လိုအချိန် မွေးလမ်းကြောင်းအတွင်း လစဉ်သုံးပစ္စည်းထည့်တာ လိင်ဆက်ဆံတာတွေကနေ ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားတွေ ပေါက်ရောက်နိုင်ပါတယ် ။ မွေးဖွားပြီး သားအိမ်ကနေ ရေမြွှာရည်လိုတွေဆင်းတာဟာ အနည်းဆုံး နှစ်ပတ်ကနေ ရှစ်ပတ်အထိ ကြာနိုင်ပါတယ် ။
မွေးပြီး လေးပတ်ကနေ ခြောက်ပတ်အတွင်းမှာ သင့်ဆရာဝန်မှ သင်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း အနာကျက်မှု အခြေအနေကို ပြန်လည်စစ်ဆေးပေးပါမည် ။ ထိုအချိန်တွင် ဆရာဝန်မှ လိင်ဆက်ဆံရန် အဆင်သင့်ဖြစ်မဖြစ် ဆုံးဖြတ်ပေးပါလိမ့်မည် ။ ထိုအချိန်တွင် လိင်ဆက်ဆံမှုကို ရှောင်ခိုင်းထားခြင်းသည်ဟာလဲ တခြား ဆက်ဆံနည်းများကိုပါ ရှောင်ခိုင်းခြင်းဟု မဆိုလိုပါ ။
လိင်ဆက်ဆံရန် စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်ကာလအတွင်း တခြားစိတ်အာသာဖြေရေး နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုကာ လိင်စိတ်ကို လျော့ပါးစေနိုင်ပါတယ် ။ တခြားနည်းများဆိုရာတွင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အာသာဖြေပေးခြင်း ၊ လက်ဖြင့် အာသာဖြေပေးခြင်းတို့ဆိုလိုပါတယ် ။ အဓိက သိမှတ်ရမည် မှာ မိန်းမကိုယ် အတွင်း ထိုးသွင်းမှုကို ရှောင်ရှားရမည်ဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် မွေးလမ်းကြောင်းချဲ့ထားခြင်း ပြန်ချုပ်ထားခြင်းအခြအနေများတွင် ရှောင်ရှားရန် အထူးလိုအပ်ပါသည် ။ ထို့အပြင်ပါးစပ်နှင့်လိင်ဆက်ဆံပါကလဲ ထိုနေရာများတွင် ပိုးကူးနိုင်သောကြောင့် ရှောင်ရှားရန် လိုအပ်ပါသည် ။
မွေးပြီးစ လိင်ဆက်ဆံရာမှာ နာကျင်နိုင်ပါသလား ?
မွေးပြီးစ မိန်းမကိုယ်ဟာ နာကျင်ယောင်ရမ်းနေသောကြောင့် သင့်အနေဖြင့် လိင်ဆက်ဆံရာတွင် နာကျင်နေနိုင်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန် အချိန်ယူသင့်ပါတယ် ။ နောက်ပြီး အနေအထားသက်တောင့်သက်သာ ရှိစေရန်လဲ ထိန်းညှိပေးခြင်းက နာကျင်မှုကို လျော့ပါးစေပါတယ် ။ မိန်းမကိုယ်မှာ ခြောက်သွေ့နေတယ်လို့ခံစားရပါက ချောမွေ့စေသော ဂျယ်လ်များ ခရင်မ်များ သုံးနိုင်ပါတယ် ။ အချိန်တော်တော်ကြာတဲ့အထိ နာကျင်မှုကနေ မသက်သာပါက သင့်ဆရာဝန်ထံ ပြန်လည်ပြသရန်လိုအပ်ပါတယ် ။
မွေးပြီးစ လိင်ဆက်ဆံရာမှာ ခံစားမှု ပြောင်းလဲနိုင်ပါသလား ?
သင့်မိနိးမကိုယ် ကြွက်သားညှစ်အားများသည် မွေးပြီးကာစတွင် လျော့ကျနေနိုင်သောကြောင့် သင့်အနေနှင့် စိတ်ပါမှုကိုလျော့ကျစေနိုင်ပါတယ် ။ ဒါဟာ ယာယီပဲ ဖြစ်တဲ့အတွက် စိုးရိမ်စရာမလိုပါ ။ သားအိမ်ကြွက်သား လေ့ကျင့်ခန်းများလုပ်ပေးပါက ပြန်လည်သန်မာပြီး ညှစ်အားကောင်းလာမည်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။